Muhiimadda caado u leedahay fardaha | Fardaha Noti
Caadada nolosha fardaha ayaa muhiimad weyn leh, iyada oo la tixgelinayo in isbeddel kasta oo lama filaan ahi ku adkayn karo, iyada oo la tixgelinayo in xayawaanku leeyahay saacad bayooloji ah oo aad uga sax badan wax kasta oo aan ku isticmaalno da'da dijitaalka ah iyo sida aan u sharraxnay marar badan, xasilloonida sinnaanta ayaa si toos ah ugu habboon waxqabadka aad na siin karto.
Farduhu waxay u baahan yihiin caadooyin adag iyo waxqabad dhab ah oo toos ah, oo ka duwan bini-aadamka u janjeera inay ka cawdaan markay maalmuhu isku mid yihiin, marka laga hadlayo fardaha, haddii ay ku cabbiri karaan rabitaankooda erayo, waxay na weydiin karaan inaan mar walba isku mid noqonno, dabcan iska tag arrin gaar ah oo ku saabsan dheelitirka, inta u dhaxeysa nasashada, tababarka iyo waqtiga quudinta ee fardaha kasta.
Farduhu waxay u baahan yihiin inay ilaashadaan howlahooda caadiga ah, iyagoo had iyo jeer maskaxda ku haya in nolosha xayawaanku ay tahay inay isu dheellitiran tahay, iyagoo qaadanaya afar daqiiqadood oo waaweyn oo muhiim ah, midna shaqo, kan kalena u yahay madadaalo iyo dabcan cunto iyo nasasho, labadaas midkoodna wuxuu leeyahay mid ka sarreysa ku habboonaanta laakiin wax badan ayaa horay looga yiri kuwan, halka tababarka joogtada ah uu yahay mawduuc aan ku badnayn khubarada.
Iyaga oo xasilloon ayaa ay farxadaha farduhu yihiin oo xasilloonida waa in aan loo fahmin inay tahay wax aan waxba qabanayn, maadaama xaalado badan shaqooyinku ku raaxaystaan ​​tababarka, tan waxaa lagu arki karaa xeryo badan, laakiin sidoo kale waa in lagu tixgeliyaa nasashada iyo saacadaha daaqsintu waa muhiim, gaar ahaan haddii ay wax la wadaagi karaan dadka kale ee ku jira lo'dooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Xeryaha » Muhiimadda caado u leedahay fardaha
Nooc Albino ah
Muhiimadda aragtida fardaha